War deg deg ah : Maxadweyne Shariif & R/w Farmajo oo isla socda oo Muqdisho ka degay – SBC
War deg deg ah : Maxadweyne Shariif & R/w Farmajo oo isla socda oo Muqdisho ka degay
Wararka deg dega ah ee nagasoogaaraya magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa sheegaya in daqiiqado ka hor Garoonka diyaaradaha ee magaaladaas ay ka soo degeen madaxweynaha DKMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed iyo Raiisul wasaaraha Dowlada KMG ah Mr Farmajo oo wada socda.
Waxaa la socda wafdi kale oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano kuwaas oo iminka ka soo degay Aadan Cade Airport, waxaana ku halkaasi sidoo kale ku sugan dadweyne aad iyo aad u farabadan oo iyagu buux dhaafiyay Agagaaraha Garoonka iyo gudihiisaba kuwaas oo halkaasi ka sameynaya Banaan baxyo xoogan oo ay ku taageerayaan Raiisul wasaaraha DOwlada KMG ah ee Soomaaliya.
Ilaa iyo iminka lama xaqiijin karo sida ay wax u socdaan maadaama aysan weli la hadlay saxaafada madaxda Dowlada ee garoonka diyaaradaha ka soo wada degay, taas oo laxasuusanyahay in Heshiis ay labada shariif dhowaan ku kala saxiixdeen Kampala ay ku saareen go’aamo ku aadan in Raiisul wasaaraha uu iscasilo.
Waxa uu ku soo aadayaa imaanshaha labadan Masuul xili magaalada Muqdisho ay ilaa iyo saaka ilaa iyo hada ay ka soconayeen Mudaaharaadyo lagu diidanyahay labada shariif laguna taageerayo Raiisul wasaaraha in uusan xilkiisa ka tagin, kaas oo ilaa iyo galabta ka soconayay Muqdisho.
Sikastaba ha ahaatee waxaa lagu wadaa saacadaha soosocda in la faah faahiyo sida ay wax u socdaan lana hadlaan saxaafada masuuliyiinta iminka ka soo degtay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.